भारतमा एकाएक छाएकी नेपालकी यी युवती को हुन् ? - Arghakhanchi Saptahik
Home Slider समाचार भारतमा एकाएक छाएकी नेपालकी यी युवती को हुन् ?
भारतमा एकाएक छाएकी नेपालकी यी युवती को हुन् ?
पाकिस्तानी चियावालापछि नेपाली तरकारीवाली भारतमा 'हिट'
काठमाडौं: केही दिनयता भारतीय सञ्चारमाध्यममा नेपालकी एक युवती चर्चाको शिखरमा छिन् । पाकिस्तानका एक चियावाला युवापछि अब चर्चाको शिखरमा पुग्ने पालो टमाटरको क्रेट बोकेकी नेपाली युवतीको आएको छ।
केही हप्ताअघिसम्म माइक्रो-ब्लगिङ्ग साइट ट्विटरमा पाकिस्तानका निलो आँखा भएका एक चियावाला अरसद खान छाएका थिए ।
भारतीयहरुले पाकिस्तानी चियावालाको सुन्दरताले भरिएको सादगी जीवनबारे फोटोसहित ट्वीट गरेपछि उनी दुनियाँभर छाएका थिए ।
एकजना चियावालाको फोटो ट्वीटरमा छाएपछि उनको भाग्य खुल्ने नै भयो । अब उनलाई मोडलिङको अफरको ओइरो लागिरहेको छ । उनी अहिले रातारात चियावालाबाट सेलिब्रेटी बनिसकेका छन् ।
तर अब उनी मोडलिङमा आइसकेपछि उनको चर्चा सेलाउन थालेको छ। अब कुरो पाकिस्तानी अरसद खानबाट अघि बढेर नेपालको एक गाउँकी युवतीमा आइपुगेको छ ।
यसपटक भारतीयहरुले नेपालको एउटा गाउँबाट पाकिस्तानी युवा जस्तै सुन्दर युवतीलाई फेला पारेर ट्वीट गरिरहेका छन् । नेपालको गोरखा जिल्लाकी एक युवती अहिले भारतीयहरुमाझ ट्वीटरमा छाइरहेकी छन् ।
यी युवतीको सादा जीवन र मेहनतलाई अहिले भारतीयहरुले तारिफ गर्दै ट्वीट गरिरहेका छन् । भारतीयहरुका लागि यी अन्जान युवती यति प्रिय बनेकी छन् कि उनीहरुले ट्वीटरमा #Tarkariwali ह्यासट्याग नै चलाएका छन् ।
भारतीयहरुमाझ यी युवतीको #Tarkariwali ह्यासट्याक हिट मात्रै भएको छैन, दिनदिनै भाइरल पनि हुँदै गइरहेको छ ।
आखिर कहाँकी हुन् त यी परिश्रमी युवती
यी परिश्रमी युवतीको घर गोरखाको भुम्लिचोक गाविस वाङ्लिङ हो । उनको नाम कुशुम श्रेष्ठ हो र उनी कक्षा ११ की विद्यार्थी हुन् । तर उनलाई आफू भारतमा यसरी एकाएक चर्चित भएको खबर सायदै थाहा होला ।
यो तस्बिर गत शुक्रवार मात्रै गोरखा र चितवनकोबीचमा रहेको त्रिशूली नदीस्थित फिस्लिङ झोलुङ्गे पुलमाथि पर्यटन व्यवासायी रुपचन्द्र महर्जनले खिचेका हुन् ।
पर्यटकहरुका लागि त्रिशूलीमा र्‍याफ्टिङ पनि सञ्चालन गर्दै आएका ठमेलको ज्याठास्थित फरएभर ट्रेकिङ एन्ड एक्सिपडिसन्स प्रालिका सञ्चालक पर्यटन व्यावसायी रुपचन्द्र महर्जनले कैद गरेका तस्बिर उनैले फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए ।
पाकिस्तानी चियावाला अरसद खानजस्तै यी युवतीलाई पनि रुपचन्द्र र उनका मित फोटो पत्रकार रुपचन्द्र महर्जनले क्यामेरामा कैद गर्न सफल भएका थिए ।
'हामी दुबैले यो फोटो धादिङ र गोरखाको सीमानामा कैद गरेका थियौं', फोटो पत्रकार रुपचन्द्रले भने, 'साथीले यी फोटो फेसबुकमा हाल्नु भएको रहेछ, तर भारतीयहरुसम्म यो फोटो कसरी पुग्यो भन्ने कुरामा हामी भने आश्चर्यमा परेका छौं ।'
No More #Tarkariwali as we all know her name now :)
रूपचन्द्रका अनुसार यी तस्बिर घुम्न जाने क्रममा ख्याल ठट्टामै कैद गरिएको हो । गोरखा र चितवनको बीचमा बनेको फिस्लिङ झोलुङ्गे पुल र चितवनतर्फको बजारमा कैद यी तस्बिरमा रहेकी युवतीको परिश्रम र उनको सरल स्वभावलाई भारतीयहरुले पनि अनुकरण गर्दै उनलाई चर्चित बनाइरहेको समाचार भारतीय सञ्चारमाध्यमले पनि प्राथमिकता दिएर लेखिरहेका छन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमले ट्वीटर प्रयोगकर्ताहरुले उनकोबारेमा प्रशंसाको फूल बर्साइरहेको जनाएका छन् । उनको सरलपना, सुन्दर अनुहार र मिलेको शरीरका कारण उनलाई 'आदर्श युवती' को स‌ंज्ञा पनि दिइरहेको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ ।
फोटोमै हेरेर आफ्नो बनाउनका लागि उनको ठेगना पत्ता लगाउने कोशिमा ट्वीटर प्रयोगकर्ताहरुले खोजी अभियान नै चलिरहेको समाचारमा जनाइएको छ ।
भारतीयमाझ एकाएक 'हिट' बनेकी यी नेपाली युवतीको भाग्य के अब पाकिस्तानी चियावाला जस्तै बद्लिएला त ? या उनी गोरखाकै गाउँमा गुमानम भएर बस्नेछिन् ? उनी पनि अशरद जस्तै रातारात मोडल या सेलिब्रेटी बनेर आफ्नो भाग्य चम्काउन सक्छिन् या सक्दिनन्, त्यो समयले बताउला